Ishawari yeMvula eKhonelwayo esebenza izinto ezininzi ezinobushushu obuthe rhoqo-IiFaucethi zeKhitshi eziBalaseleyo ngo-2021 | IiFaucethi zeBathroom ezigqibeleleyo | WOWOW iiFaucets
Ikhaya / Shower Imibhobho / Iinkqubo zokuhlamba / Ukuhlanjwa kweMvula ngokuKhokelwa kukuSebenza ngokuSebenzayo ngeXesha lobushushu
Ukuhlanjwa kweMvula ngokuKhokelwa kukuSebenza ngokuSebenzayo ngoBushushu obuQhelekileyo
Kutheni le nto kufuneka u-odole le mveliso?
Ukuhlambela ngamava emihla ngemihla anokuba nefuthe elinamandla kwiimvakalelo zakho emini, kutheni ungasebenzisi kakuhle. Yonwabele le ndawo yokuhlambela ifanelekileyo kuyilo oluhle, lomelele kakhulu kwaye likhuselekile ukuyisebenzisa, ngelixa ugcina ixesha kunye nemali ngaxeshanye.
Igama lebrand: HM
Uhlobo lofakelo: lulungiswe eludongeni
Imilo yeshawa: isikwere
Izinto zokuhlamba intloko: Intloko yeshawari ye-LED
Izinto eziphathekayo: insimbi engenasici
Uhlobo: ujikelezo oluzinzileyo.
Ukugqiba umphezulu: chrome.
Inombolo yomzekelo: HM-836001
Umsebenzi wokuhlamba amanzi 1: ishawa yemvula
Ukuhlamba i-Fuchntion 2 ishawa ngesandla
Umsebenzi wentloko yeshawa ye-3: Akukho sidingo sokususa udonga ngexesha lolondolozo.
I-LED Shower Frucntion 4: Ishawari eyakhelwe-ngaphakathi
Umsebenzi weshawa we-Thermostatic 5: 200 V, uguqulelwe kwi-12 V.
Umsebenzi weshawari yentloko 6: Unyango lokukhanya kombala we-LED
Umsebenzi wokuhlamba imvula we-LED 7: Ukwahlulahlula amanzi nombane, kukhuselekile.
Iadaptha yeshawa ye-LED: 90 - 250 V.
Iimpawu: Esi sishushu sobushushu se-LED rhoqo. Le bhafini kunye neshawari yokufakelwa ixhotyiswe ngentloko yeshawari ejikelezayo kunye nesiphatho esisebenziseka lula. Isibini esi sikhuselo kwi-Rite-Temp yoxinzelelo lokulinganisa i-valve egcina ubushushu bamanzi obufunekayo ngexesha lokutshintsha koxinzelelo.
Iimpawu: ishawa yemvula, ishawa yezandla, iveluji yolawulo lwe-thermostatic, ishawari eyakhelwe-ngaphakathi, unyango lokukhanya kombala we-LED
Le yishawa ye-LED ebekwe ngebhokisi edityanisiweyo. Ukuvuza kwamanzi: imvula, ishawa. Iswitshi ye-thermostat yenziwe ngezinto zobhedu olupheleleyo, inebhokisi eyakhelweyo, ufakelo olululo. Ukulungiswa akuyi kukukholisa iindonga. Iqondo lobushushu lingagcinwa kuma-38 degrees, kuthintele ubushushu nokubanda ukunqanda ukutsha.
ITHEKNOLOJI YOKUQHELEKILEYO: Inkqubo yeshawa ye-Thermostatic yivalve yeshawari enenqanaba eliphezulu lokuhamba, 7 - 9 l / min. Amacwecwe amatsha ama-7 etekhnoloji yokubeka umbane ukugcina umhlwa. Abantwana abakhulu kunye nabasetyhini abakhulelweyo banokuyisebenzisa. Le ntloko yeshawa inokufumana imvakalelo yokwenene yemvula kunye ne-SPA yokuthambisa ukukhupha amanzi, ukudinwa kunye noxinzelelo. Yeyona nto unokukhetha kuyo, isigqibo sokonwabela ubomi bakho.
ISIQINISEKISO-iwaranti yonyaka eli-10 kwicandelo eliphambili, iwaranti yonyaka omnye kwilayiti yokukhanya ye-LED kunye neshawa! Ukuba unayo nayiphi na ingxaki esemgangathweni, nceda unxibelelane nathi.
Inkqubo yokuhlamba i-LED yokuSebenza ngokuSebenza ngeC ...